crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> Dalalka ugu fiican ee Hooyo lagu noqdo iyo kuwa ugu liita ee Hooyo lagu noqdo | HimiloNetwork
Dalalka ugu fiican ee Hooyo lagu noqdo iyo kuwa ugu liita ee Hooyo lagu noqdo
Posted by: Zakariya in Wararka January 20, 2016	0 478 Views
Muqdisho (Himilonews) – Marka shinka hooyadu kusoo dhawaado xilliga dhalmada, waxay is-weydiisaa halkee talow igu fiican ee aad ku dhashaa?! Way dhacdaa meesha ugu fiican ee aad ku dhali karto waa Finland –dalka ugu habboon ee hooyo lagu noqdo, marka loo eego tirsiga 14th Hooyada ee hey’adda Save the Children.
Tirsiga, oo qeyb ka ahaa warbiixnta sanadlaha ah ee hooyooyin adduunka, waxaa lagu dow-galay in lagu falanqeeyo xiriirka ka dhaxeeya hooyada iyo dhallaanka. Sanad kasta, wax ku dhow saddex milyoon oo dhallaan ah ayaa ku dhinta bilaha hore ee noloshooda—in ka badan 1/3 ayaa ku dhinta if usoo baxa –halka 287,000 oo haween ah ay xaamilada ama dhalmada ku dhintaaan, marka loo eego warbixinta.
Tirsiga kala horreynta ee dalalka waxaa lagu jaan-gooyey badqabka shan siyaalood of ku saabsan faya-dhowrka hooyada: xilliga shinka iyo dhalmada, faya-qabka dhallaanka dhalashadiisa ee afarta sano ka yar: heerka waxbarasho ee hooyada: heerka dhaqaale iyo hannaanka siyaasad ee dalkaas ka jira.
Finland waxaa si durduuran ugu xiga dalalka deriska la ah iyo kuwa kale ee reer Yurub. Australia ayaa ah dalka kaliya ee aan reer Yurub aheyn ee galay 10-ka sare.
Dalalka horumaray boqolkiiba 1% ayay ka joogaan heerka dhimasho ee dhallaanka ku baxa if-usoo baxa koobaad. Maraykanka oo leh tiro badan oo dhalmo ah, 11,300 oo dhallaan ayaa sanad kasta ku dhinta if-usoo baxa hore ee nolosha—taas oo ka dhigaysa dalka labaad ee kuwa horumaray ugu sarreeya heerka dhimasho ee dhallaanka.
Maraykanka ayaa sidoo kale leh tiro badan oo da’yar dhalmooley ah—da’yartan ayaa helin waxbarasho ku filan oo heer sare ah, daryeel waalid iyo ilo dhaqaale oo kaaba noloshooda.
Dalalka ka hooseeya saxaraha ayaa soo galay 10-ka dal ee ugu liita inay haweeney ku dhasho oo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo ay kow ka tahay.
Caskiga dalalka koobaad ee ugu sarreeya daryeelka caafimaad ee haweeneyda iyo dhallaanka ayaa dalalka hoose booskaas dhaxalsiisay.
Hadaba, Himilonews.com, waxay idin soo gudbinaysaa 10-ka dal ee ugu sarreeya daryeelka caafimaad ee haweeneyda iyo dhallaanka iyo kuwo ugu liita.
Kuwa ugu sarreeya:
Kuwa ugu hooseeya:
Previous: Wiil dar Alle iyo Islaam jaceyl si fudud ugu gooyay gacantiisa
Next: Halkee lagu qubaa qashinka laga qaado Magaalada Muqdisho?+Sawiro